‘गठबन्धनलाई पहिलेनै जितेका हौं, यो पटक थप शक्तिका साथ सबै स्थानीय तह जित्छौं’ :: लक्ष्मण थामी :: ‘गठबन्धनलाई पहिलेनै जितेका हौं, यो पटक थप शक्तिका साथ सबै स्थानीय तह जित्छौं’
शुक्रबार, चैत २५, २०७८ लक्ष्मण थामी
दोलखाका राजनीतिक दलहरु वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिईसकेका छन् । निर्वाचन परिणामको सन्दर्भमा दलहरुको आ–आफ्नै दाबी छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठनबन्धनलाई पाराजित गर्दै जिल्लाका ९ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहमा बिजय प्राप्त गरेको थियो । आसन्न निर्वाचनमा एमालेले सबै स्थानीय तहमा बाजी मार्ने दाबी गरिरहेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले दोलखाको तयारी र जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालका सन्दर्भमा एमाले जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठसँग गरिएको संवादको संम्पादित अंश...
गाउँपालिका अध्यक्ष, पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपनि नजिक आईसक्यो । धेरै जिम्मेवारीमा एकपटक सक्रिय हुनुपर्दा थकान र बोझको अनुभुति भैरहेको छैन ?
बिद्यार्थी जीवनबाट सुरु गरेको राजनीति बिभिन्न जिम्मेवारी हुँदै आज पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । मैले राजनीति सुरु गरेको ४२ वर्ष भैसकेको छ । द्धन्द्धकालको कठिन परिस्थितिमा पनि नआत्ति काम गरेको मान्छे हुँ । म धेरै खटेर काम गर्ने मान्छे हुँ । नेकपा एमाले दोलखालाई अझ शक्तिशाली र अभिभावक पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न अहोरात्र खटिरहेको छु । राजनीतिमा थकाई भन्ने शब्दावली हुँदैन ।
राजनीतिकर्मीहरुलाई अहोरात्र खट्दापनि थकान नहुने शक्ति चाँही कसरी प्राप्त हुँदोरहेछ ?
पहिलो कुरा त हामीलाई व्याक सपोर्ट भनेको माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनबाद छ । बहुदलीय जनवादलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्नेगरी अहिले सुखमा नेकपा एमाले, दुखमा नेकपा एमाले, आपतविपदमा एमाले, जनताको मनमस्तिष्कमा नेकपा एमाले र जनताको घरदैलोमा नेकपा एमाले भन्ने नाराका साथ पार्टीलाई अघि बढाउने प्रयासमा छु । जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको मायाका कारण राजनीतिमा थकान भन्दा पनि थप उत्साहित भएर लाग्ने प्रेरणा मिलिरहेको छ ।
अलिकति मेलुङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गरौं न अध्यक्ष ज्यू, पाँच वर्षको कार्यकाल कसरी बित्यो ?
हामी निर्वाचित भएको एक वर्ष ऐन, नियम, कानुन बनाउन चुनौती थियो । संघीय सरकारले समयमै ऐन, कानुन निर्माण गरेर नदिँदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या भयो । ऐन कानुन नपाउँदा जनप्रतिनिधिहरुले रणभुल्लमै बिताउनुपर्यो । त्यसपछि पाँचवटा ऐन कार्यान्वयनमा ल्यायौं । पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारतर्फ १४ वटा सडक योजनालाई गौरबको आयोजनाको रुपमा अघि बढायौं । त्यसैगरी जनता आवाज कार्यक्रम, सिमित स्रोतसाधनका बावजुत शिक्षा पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, प्रशासनिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो काम गर्यौं । त्यस्तै उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा पनि महत्वपुर्ण काम सम्पन्न भएका छन् ।
यहाँहरुले पाँच वर्षको अबधिमा गर्नुभएको कामले मेलुङको विकास र समृद्धिमा चाँही ठोस योगदान कत्तिको पुगेको छ ?
सिमित स्रोतसाधनका बावजुत उल्लेख्य काम सम्पन्न गर्न पाउँदा सन्तुष्ट छु । गाउँपालिकाले धेरै क्षेत्रमा फड्को मार्ने काम गरेको छ । यहाँहरुले क्रस चेकपनि गर्न सक्नुहुन्छ । बजेट अभाव लगायतका कारण गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन चाँही बनाउन सकिएको छैन । अरु अनगिन्ति कामहरु भएका छन्, जसले जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ ।
अब जिल्लाभरीको सबै स्थानीय सरकारलाई सबल र नयाँ मोडलका साथ अघि बढाउने स्पष्ट खाकासहित हामी आउँदैछौं । आगामी निर्वाचनमा दोलखाका सबै स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले बिजय हाँसिल गर्छ र बाँकी अधुरा काम नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले गर्नेछन् ।
तर विकासबारे जनप्रतिनिधि र जनताको बुझाई फरक फरक छ, अध्यक्ष ज्यू, जनप्रतिनिधिहरुले दाबी गरेजस्तो विकास भएको कुरालाई किन आत्मासाथ गर्न नसकेको हो त ? कि विकास बारे जनतालाई बुझाउन नसकेको हो ?
यो सबै विकासे काम सरकारको हो भन्ने कुराले समस्या भएको हो । त्यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र पहलकदमीको कुरा ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । समाजमा नकारात्मकता व्याप्त छ । भएको कामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रबृत्ति छ ।
होईन, सपना देखाउने, नारा लगाउने, आदर्शका कुरा गर्ने एकातिर होला तर व्यबहारतः कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण होला नी ?
नाराको कुरा मात्रै होईन । हामीले अघिल्लो निर्वाचन र अहिलेपनि जनताको मन छुने कार्यक्रम ल्याउँछौं । र कार्यान्वयन गर्छौँ ।
यति धेरै कामको फेहरिस्त यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । तर जनतामा सन्तुष्टि त देखिँदैन नी, कारण के होला ? केही विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
मेलुङमात्रै होईन मुलुकभरी असन्तुष्टि देखिन्छ । तर जति प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो असन्तुष्टि छैन । जनताको अपेक्षा अर्वौको छ, तर हामीले १२ करोड भित्र रहेर गाउँपालिकाको सबै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त बजेट भ्रष्टाचार पुर्ण रुपमा न्यूनीकरण हुने र सुशासन स्थापित हुनेगरी काम गरिएको छ । केही काममा समस्या छन् । जस्तो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंकिङ प्रणाली लागु भएपछि जनतालाई कष्ट भएको छ । अहिलेको संघीय शासन प्रणाली अनुसार गुठि ऐन संशोधन र कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ । र प्रशासनिक भवन बन्न नसक्दा जनतामा केही गुनासो हुनु स्वभाविक हो ।
अब निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत भएर कुराकानी गरौं न, बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा एमालेको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हामीले गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा पार्टी परिचालनको अभियान संचालन गरेका छौं । कार्यविभाजन भएको छ । मत सर्वेक्षण सहित हाम्रा लोकप्रिय उम्मेदवार पहिचानको काम भैरहेको छ ।
अभियानको निष्कर्ष र रिपोर्ट कस्तो प्राप्त भैरहेको छ ?
पहिलो कुरा त, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्ने कुरा हो । पटक पटक पार्टीको बिभिन्न तहको बैठक बसेर मसिनो ढंगले समिक्षा गर्ने काम भैरहेको छ । अहिले अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा गरेर निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् । उम्मेदवारको मापदण्ड अनुमोदन गरेर सोही अनुसार उम्मेदवार टुंगो लगाउने काम सुरु भएको छ ।
उसोभए कहिलेसम्म वडा र नगर तथा गाउँपालिकाको टिकटको टुंगो लागिसक्छ ?
सर्वसम्मति भएको अवस्थामा यही २६ गतेभित्र जिल्ला कमिटिमा उम्मेदवारहरुको नाम आईपुग्छन् । त्यो जिल्ला कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छ र २७ गतेसम्म त्यसलाई कम्पायल गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि बस्ने जिल्ला कमिटी बैठकले त्यसलाई फैसला गर्छ ।
टिकटको सन्दर्भमा माथिबाटै टिका र आशिर्वाद दिएर पठाउँदा समस्या हुने गरको पाईन्छ । जनताले रुचाएको स्वच्छ छवि र लोकप्रिय उम्मेदवार कसरी छनोट हुन्छ ?
त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्छु । निर्वाचन जित्न को व्यक्तिलाई उठाउँदा सजिलो हुन्छ हामी त्यसको पक्षमा निर्णय गर्छौँ । कतिपय वडाबाट प्राप्त भएका व्यक्तिले निर्वाचन हार्ने अवस्थामा जिल्लाले रिथिंक गर्नसक्छ ।
दोलखाको ७४ वटै वडा र ९ वटै स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गर्छ भनेर यहाँले पटक पटक दोहोर्याईरहनुभएको छ । त्यो कसरी सम्भव छ ? त्यस्तो जित्ने आधार एमालेसँग छ ?
पहिलो कुरा त, अहिले नेकपा एमाले नेता कार्यकर्तामा उत्साह भरिएको छ । सबैजना पार्टी निर्माणको अभियानमा अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । अर्को कुरा पार्टी सरकारमा हुँदा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा अतुलनिय योगदान पुगेको छ । जनताले नसोचेको विकास भएको छ । तेस्रो कुरा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता असाध्यै मिहिनेती छन्, अनुशासित छन् । एमाले नेतृत्व लोकप्रिय छ, सबै जनताले माया गर्नुहुन्छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी देखि अहिलेसम्म गरेको जनपक्षिय कामको श्रेय एमालेलाई जान्छ ।
एमालेमात्रै त्यस्तो पार्टी हो, हामी कुनै अप्राकृतिक गठबन्धन बिना एक्लै जनताको बीचमा टेस्टेड हुन चाहन्छौं । परीक्षा दिन चाहन्छौं । अरु पार्टीमा एक्लै जाँदा हारिन्छ, एमालेले रित्तो बनाउँछ । गठबन्धन बिना सम्भव छैन भन्ने छ । कांग्रेस, माओवादी लगायत अन्य पार्टीमा आँट र दम छैन । जनतामा एमालेप्रति अगाध माया छ, स्नेह छ । यसअघि जिल्लाको दुई वटा गाउँपालिकामा सफलता प्राप्त भएन । त्यतिबेला रणनीतिक योजना निर्माणमा केही समस्या भयो । यो पटक नेकपा एमाले विशेष योजनाका साथ निर्वाचनमा जान्छौं । त्यसैले हामी जित्छौं । हामी अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको समिक्षा सहित समृद्ध दोलखा बनाउने स्पष्ट खाकासहितको घोषणापत्र ल्याउँछौँ ।
मतदाताले एजेन्डालाई हेरेर भोट हाल्लान् त ? अरु कुराले प्रभाव पार्छ भनिन्छ ?
एमाले विचार एजेण्डा बुझाएर मत माग्ने पार्टी हो । अन्य पार्टीसँग एजेण्डा छैन । हामी दोलखा निर्माणको खाका ल्याउँछौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अन्तर्गत दोलखा कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याउँछौँ । दोलखालाई आत्मानिर्भर, दोलखालाई प्रांगारिक जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्नेगरी, युवा स्वरोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष ध्यान दिईनेछ ।
अर्को कुरा जिल्लाका ७४ वडामा नेतृत्व गर्ने हाम्रा वडा अध्यक्षहरु, गाउँ तथा नगर अध्यक्षहरु लामो समयदेखि आन्दोलनबाट खारिएको, जनताको मनमस्तिष्कमा स्थापित, विकासको नेतृत्व गर्नसक्ने नेताहरुको पंक्ति एमालेसँग छ । त्यस्ता नेतालाई हामी अघि सार्छौँ । अरु राजनीतिक दलमा एजेण्डा त छैन नै । चरम अन्तरकलहपनि छ । बिधिविधान केही छैन । तर एमाले एकताबद्ध पार्टीको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । एकमना एकताका साथ एमाले चुनावमा होमिन्छ, होमिएको छ । त्यसैले हामी दोलखाका ७४ वटै वडा र ९ वटै स्थानीय तहमा एकछत्र जित्ने हाम्रो तयारी छ ।
भनेपछि पाँच दलीय गठबन्धनको चुनौतीलाई समना गर्न दोलखा एमाले तयार छ ?
हो, गठबन्धनको जस्तोसुकै चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी दोलखा एमाले अघि बढ्छ । कहीकसैसँग हामी कम्प्रोमाईज गर्दैनौं । ७४ वटै वडामा एमालेले एकल उम्मेदवार अघि सार्छ । गठबन्धनको नाममा जनताको मतको दुरुपयोग गर्ने, रुखले हँसिया हथौडा र हसियाँ हथौडाका मतदाताले रुखमा भोट हाल्नुपर्ने लज्जास्पद अभ्यास हामी गर्दैनौं ।
त्यत्रो शक्ति एमालेसँग छ र भन्या ?
एमालेबाट एस पार्टीमा गएका धेरै नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किसक्नुभएको छ । अझै फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रका माथिल्ला तहदेखि तल्लोतहका कयौं नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रम तिब्र छ । ठुलो संख्या नेपाली कांग्रेसबाट एमालेमा समाहित हुँदैछन् । एमाले अहिले आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । त्यसकारण एमाले अहिले ७४ को भन्दा थप सुदृढ र शक्तिशाली भएर आएको छ । त्यो निर्वाचन जित्ने प्रष्ट आधार हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २५, २०७८ १२:३५